August 20, 2020 349
चर्चा र आलो’चनामा फसिरहने मो’डल तथा चर्चित युट्यु’बर फेरि वि वा द मा तानिए’की छन् । केही समयअघि पुर्व युवराज पारस शाह संग नजिक भएका कारण आलो’चित भएकी सोनिका यो पटक आर्थिक लेनदेनका कारण विवा’दमा मुछिएकी हुन् ।
उनले यो कुराको सुरु:वाती आफैले गरेकी हुन् । फेसबु:कमा लाईभ गर्दै राम गौतमको नाम लिएर जथाभा’वी अ श्लील गा’ली गरेकी छन् । गौतमले यो कुरा थाहा पाएपछि बोलेका छन् ।
सोनिकाले आ:फुले दिएको हि’साब पनि नराख्ने अनि आफुले देखाउदा हिसाब देखेपछि तपाईं लु’ट्न बसेको भन्दै आ’रोप लगाएको बताए । ५ हजारमा काम गर्दिनु भन्दै रु’एको र आफुले भन्दा पनि छोराले गर्ने भएको कारण उनले नमान्ने भन्दै ५ हजा:रमा काम गर्न नसक्ने सुनाए ।
रामले कुराकानीमा सोनिकाले भने बमो’जिम १ वर्षसम्म २० हजार दिएको पनि स्वीकारे । फागुन महिनामा पारस संग मस्ति’मा पोखरा घुम्दा खेरी आफुलाई पैसा नपठाएको आ रो प लगाए । लकडाउन भएपछि आफ्नो नैतिक:ताले पनि नदिने भन्दै चैत’देखी मासि’क १० हजारका दरले दिन भनेपछी उक्त कुरामा सोनिका:को पनि सहमती भएको बताए ।
बिचमा पैसा पठाईरहेकि सोनिकाले यो गएको महिनाको पैसा नपठाएको उनको गु’नासो छ । जस’का कारण एक’पछी अर्को बाकी रकम बढ्दै गएको थियो । यता रामले कुराकानिमा अर्को कुरा पनि खुलाएका छन् । पोखरा घुम्न जादा सोनिकाले पार’ससंग झ’गडा गरेर क्यामे’रा फुटाएको कुरा खु’लासा गरेका हुन् ।
रामका अनुसार उक्त क्यामेरा सोनि’काले केही ठाउमा बनाउन देखाए तर नबनेपछी आफुला’ई बनाई’दिन जिम्मा लगाएको र लाग्ने खर्च पनि दिने सोनिकाले भनेकी थिइन् । तर, क्यामेरा बनाउन दिए’को ठाउमा गई अनेक बाहा’ना गरि रामले क्यामेरा बनाएको ६ हजा’र पैसा दिने भन्दै क्यामेरा लगेको र सो पैसा पनि अहि’लेसम्म नदिएको उनले बताए ।
यस्तै लकडा’उन सुरु भएदेखी अफिसको ५० हजार भाडा तिर्न नसकेपछि अफिस पनि आफुले अरुलाई बेचा’ईदिनु परेको सुनाए । त्यसपश्चात् भिडि’यो एडिट’को काम रामको छोराले घरमै बसेर गरिरहेका थिए । सोनिकाले स’मस्यामा छु भन्दै ५ ह’जारमा काम गर्न भनेपछि त्यो नसक्ने भन्दै अर्को मान्छे खोज्न र त्यो बेलासम्म आफुले कामको एक सुक्का पनि नलिने कुरा रामले भने ।
सोनिका’को बैनी सुधाले बाकी रकम तिर्न रहेको स्वीकार गरे । तर, सोनिकाले लु’ट्न खोजे’को रामले आरोप लगाए । आफुले उक्त लाइभ भिडियो नहेरेको भन्दै सुधाले बाकी पैसा २/४ दिन’मा दिन्छौ तर कम्प्युटर दिनुस भनेको तर कम्प्युटर दिए’पछि उक्त पैसा नपाउने उनको भनाइ छ ।
युट्युबको माध्यम हुँदै युवापुस्ता माझमा निकै लोकप्रिय बनेकी उनी यो पटक लाईभमा निकै आ क्रो शि त देखिएकी थिइन् । यस्ता आर्थिक लेनदेनका कुरा आ’पसी समझदारीमा नमि’लाएर एक्कासी फेसबुक लाइभमा यस्ता कुराहरु भन्नु या यसरी प्रस्तुत हुनु उनि आफै’मा लज्जा’को कुरा हो ।
उनले राम गौतमको क र्तुत बाहिर ल्याउछु भन्दै गो लि हा न्छु सम्म भनेकी छन् । आफ्नो आमाले फेसबुक ला’इभ रोक्न खोज्दा आमालाई नै गा’ली गरेको लाइभमा देख्न सकिन्छ ।
Prevलाईभमै आएर देखाए आकाशले पूजाको माया (भिडियो सहित)
Nextअञ्जली अधिकारीसँग रामजी खाँडको ‘के मा चित्त दुख्यो’ ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
तेस्रो बिहे नगर भन्दै आ`उँछन्, के मेरो बिहे खर्च उनी`हरुले तिर्नुपर्ने हो र ?
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (107847)